ဘက်တီးရီးယား (သို့) မှိုရောဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် နှလုံးအမှေးပါးကိုထိခိုက်စေနိုင် | Page2| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဘက်တီးရီးယား (သို့) မှိုရောဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် နှလုံးအမှေးပါးကိုထိခိုက်စေနိုင်
ပါးစပ်၊ အရေပြားနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားမှာ ရောဂါတွေကိုဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပိုးတွေက တစ်ခါတစ်လေ မှာ နှလုံးကိုပါဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒီလို ပိုးဝင်ပြီး နှလုံးအမှေးပါးရောင်ခြင်းက မြန်မြန် ကုသမှုမခံယူရင် ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စောစောသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြောင့် ပိုးဝင်ပြီး နှလုံးအမှေးပါးရောင်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသလဲ?
ထင်မှတ်မထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာတောင် (ဥပမာ-သွားတိုက်စဉ်၊ ၀မ်းသွားစဉ်) ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ၊ မှိုတွေက သွေးထဲကိုဝင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ နှလုံးကတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ပိုးဝင်တာပြင်းထန်ရင် နှလုံးအဆို့ရှင်တွေကို သွားပြီးတိုက်ခိုက်ပါတယ်။
နှလုံးအမှေးပါးရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပိုးအုပ်စု4စုကတော့
2. Viridans group streptococci
4. Coagulase-negative staphylococci
ရောဂါအားလုံးရဲ့ 3-4% လောက်ကသာပဲ Candida လို့ခေါ်တဲ့ မှိုတစ်မျိုးစွဲကပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးထဲကို ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရင် ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိပေမယ့် အောက်ပါလူတွေမှာ ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေ များပါတယ်။
3. ပိုးသတ်မထားသော ဆေးထိုးအပ်များနှင့် ဆေးထိုးခြင်း
4. သွေးကြောထဲသို့ ပိုက်ထည့်ထားရသူများ
5. အရင်က နှလုံးအမှေးပါးရောင်ခြင်းဖြစ်ဖူးသူများ
အဖြစ်များဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ဖျားနာခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ယခင်က ဘာရောဂါမှမရှိဘဲ ကျန်းမာနေတဲ့လူမှာဆိုရင်တောင် သိသိသာသာနေလို့ ထိုင်လို့မကောင်းတာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါရှိသူတွေနဲ့ အရင်ကတည်းက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး အားနည်းနေတဲ့သူတွေ ဆိုရင်တော့ နှလုံးအမှေးပါးရောင်ခြင်းကြောင့် မောပန်းတာလား၊ နဂိုရောဂါအခံကြောင့်ပဲလားဆိုတာကို မသိနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုဆိုးလာမလာ အမြဲသေချာဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။
သွေးယူပြီး ပိုးမွေးခြင်း - ပိုပြီးသေချာဖို့အတွက်ဆိုရင် နေရာနှစ်နေရာက သွေးကိုယူပြီး ပိုးမွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Echocardiogram - နှလုံးဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး နှလုံးအဆို့ရှင်တွေကောင်းမကောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါသေချာမသိခင်မှာ အဆုတ်ရောင်ခြင်းနဲ့ အခြားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းလို့ထင်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးတွေ ပေးထားတဲ့အခါမှာ သွေးထဲမှ ပိုးမွေးတဲ့အခါအခက်အခဲဖြစ်ပြီး တိကျတဲ့ ရောဂါအမည်ရရှိဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။
ပိုးသတ်ဆေးတွေပေးပြီး ပိုးတွေသေအောင်ကုသတာမျိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသတာမျိုး (နှလုံးအဆို့ရှင် ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့လျှင်) လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
မှိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နှလုံးအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းက ပိုပြင်းထန်လေ့ရှိပြီး ခွဲစိတ်မှုပိုလိုအပ်လေ့ရှိပါတယ်။
အားကစားခန်းမသွားရင်း ရောဂါပိုး ကူးမခံရအောင် ကာကွယ်ကြမယ်
ကိုယ်လုံးအလှလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာတွေ gym သွားကြတာတွေ ခေတ်စားလာတဲ့အလျောက် အားကစားခန်းမသွားတိုင်း ကျန်းမာသန့်ရှင်းစွာ ကစားကြဖို့ အကြံပြုချက်လေးတွေ ပေးပါရစေ။
ချွေးကထွက် လူကစုံတဲ့ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းမတွေဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ မှိုပိုးတွေ ပေါင်းစုံခိုအောင်းရာနေရာ...
၂၂.၆.၂၀၁၈ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
Desiree ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ gym ရဲ့ ရေနွေးစိမ်ကန်ထဲ အချိန်တော်တော်ကြာအောင် စိမ်ပြီး ရေအေးကန် ပြန်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ ရုတ်တရက်ကြီး မူးလာပြီး သတိမေ့သွားပါတော့တယ်။ သူ ပြန်သတိရလာတဲ့အချိန် ပထမဆုံး တွေ့ရတာကတော့ စိုးရိမ်တကြီး ငုံ့ကြည့်နေတဲ့ သူ့အမ မျက်နှာပါပဲ။ တစ်ခါမှ မဖြစ်စဖူး အဖြစ်ထူးတာမို့ သူ...